HomeSuuqa kala iibsigaMohamed Elneny oo lagu sawiray Asagio Qandaraas cusub u saxiixaaya Arsenal
May 23, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Arsenal Mohamed Elneny ayaa u muuqday mid lagu sawiray isagoo qalinka ku duugay heshiis cusub oo uu u saxiixayo kooxda ka dhisan Waqooyiga London.
Iyadoo Thomas Partey iyo Granit Xhaka ay sameysteen khad dhexe oo wax ku ool ah oo isku xiran xilli ciyaareedkan, Elneny ayaa inta badan lagu xaddiday kursiga keydka ololaha 2021-22.
Si kastaba ha ahaatee, dhaawacii bowdada ee Partey ee xilli ciyaareedkii dhamaaday ayaa wadada u furay Elneny inuu ku soo laabto XI ee ugu horeysay, xiddiga heerka caalami ee dalka Masar ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed adag.
Elneny waxa uu ciyaaray 90-kii daqiiqo ee ciyaarta mid kasta oo ka mid ah todobadii kulan ee ugu dambeeyay ee ay Arsenal ciyaartay horyaalka premier League – waa uu badiyay shan ka mid ah sidoo kale waxa uu caawiye ka ahaa goolkii Xhaka uu ka dhaliyay Manchester United.
29-sano jirkaan ayaa haatan lagu wadaa inuu noqdo wakiil xor ah bisha soo socota, waxaana markii hore la filayay inuu u dhaqaaqo xilli uu ku maqan yahay Emirates ka hor inta uusan gelin wadahadalo heshiis cusub ah.
Hadda, Elneny ayaa laga yaabaa inuu sii joogo caasimadda, iyadoo weriyaha football.london Kaya Kaynak uu qolka warbaahinta ku arkay ciyaaryahanka khadka dhexe oo qalin gacanta ku haysta ka dib markii ay 5-1 kaga badiyeen Everton axadii.
Elneny ayaa la sawiray sawir qaadaha kooxda Arsenal, waxaana uu u muuqday inuu sidoo kale warqad ku hor yaallay miiska, taasoo muujineysa inuu dhab ahaantii kordhin karo sii joogida Gunners.
Ka dib markii ay soo shaac baxday baraha bulshada, saxafiga Sam Dean ayaa intaa ku daray in ninkii hore ee Basel uu ogolaaday heshiis cusub oo hal sano ah oo uu ku dooran karo 12 bilood oo dheeraad ah.
In kasta oo uu door ku lahaa beddelka/kaabista ee Mikel Arteta , Elneny ayaa hore u sheegay in uu aad u doonayay in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda uu ‘jecel yahay’.
“Mar walba waxaan jeclahay tartan, waxaana bixiyaa boqolkiiba 100 mar walba, ma go’aansado cidda ciyaaraysa, laakiin waxaan sii wadaa tababarka si aan u muujiyo sida aan u fiicanahay iyo inaan ka dhigo inuu i ciyaaro,” Elneny ayaa u sheegay suxufiyiinta.
“Hadii aanan ciyaarin waan sii wadaa ilaa aan ka helayo fursaddeyda, hadii Arsenal ay tiraahdo waan ku dooneynaa, kuma fikirayo inaan baxo, waa qoyskeyga muddo lix sano ah, waan jeclahay kooxdaan.”